Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ igwe ịcha iko?
Automatic Glass tingcha Machine
Sintered Stone Machinecha Machine
Glass Edge egweri Machine
Akpaka Glass Loading Machine
Olee otú ịhọrọ iko ọnwụ igwe?
1. Nhọrọ: dịka oke nha nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, họta nke dabara adaba maka nke gị, ihe ngosi igwe 2626: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, ụdị 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, Model 3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm
Tụle ihe ndabere nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe okirikiri nhọrọ ukwuu, n'ihi na ọ na-agụnye nkịtị ngwá eyi na akwa na-abaghị uru ego ego.
2. ịcha ncha: dika ezigbo mkpa ị chọrọ ịhọrọ.
3. igbutu ọsọ: ọsọ ọsọ bụ nnukwu arụmọrụ nke igwe mkpochapu, naanị akụkụ igwe na njikwa nke arụmọrụ yana ndakọrịta nke ọnọdụ dị mma, igwe ncha iji nweta ọsọ kwekọrọ, yabụ n'agbanyeghị
Kedu ọsọ ọ chọrọ? Ọsọ nke igwe ịcha ahụ bụ ezigbo ngosipụta nke arụmọrụ nke igwe ọnwụ ahụ.
4. Ọrụ akpaaka njikarịcha arụmọrụ: ogo nke njikarịcha iko bụ nkwa dị mkpa nke ọkwa ọkwa iko, kọmpụta ozugbo njikarịcha mmekọahụ nwere ike ghara ị nweta nsonaazụ kacha mma.Ọrụ nke ma mgbanwe akwụkwọ ntuziaka nke abụọ mgbe emechara ya ga-abụ ikpe ikpe dị mkpa ihe ngosi nke ọganihu nke usoro njikarịcha.
5. akụkụ igwe: nkwụsi ike na izi ezi nke nkwa ahụ, nke mbụ bụ akụkụ igwe nke imepụta na ntinye nke ezi uche ga-abụ ihe dị mkpa. Iji hụ na ịdị mma nke akụkụ igwe na ihe yiri nke okporo ụzọ na-eduzi n'akụkụ abụọ , Otu esi egbochi nrụrụ na mgbanwe mgbe enwere ike idozi ụdị ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke nyocha nke igwe.
6. ọrụ: ọrụ nke igwe ncha bụ ihe ịrịba ama dị mkpa iji nyochaa arụmọrụ nke igwe ọnwụ. Nwere ike ịhazigharị nrụgide, ọrụ nyocha na-akpaghị aka, nwere ike ịga ije na-enweghị 360 Celsius, ịdebanye aha na-akpaghị aka, ma enwere ọrụ njedebe ngwaọrụ. were gabazie.
Post oge: Mar-17-2021
Shandong Huashili akpaaka Technology Co., Ltd.